Builk for Construction Myanmar - ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Business Management Software - BUILK Myanmar
Really? Why FREE?
100% FREE , Sign Up Now
Always FREE , Sign Up Now
၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ Builk အနေနဲ့ 
US 800 Million ကျော် ကို လည်ပတ် စေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ရိုးရှင်းတဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပုံနှင့် အတူ ဆောက်လုပ်ရေး
အလေအလွင့် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှူ နဲ့ အတူ
တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ် ။
how to use Builk
Builk ရဲ့ ပိုမိုအဆင်ပြေစေမယ့် ဈေးဝယ်မှုပုံစံ စနစ်ဖြင့် ဈေးနှုန်းများကို သင်နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်နိုင်ပါပြီ.
Builk ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ
သင့်ရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကုန်ကျစရိတ် ထိန်းချုပ်ဖို့ အတွက် လိုအပ်တဲ့အရာအားလုံး ဒီမှာရှိနေပါတယ် ။ အ၀ယ်ပစ္စည်းတွေ မှာ မလား ၊ ၀ယ်မလား ၊ စာရင်းသွင်းမှာလား ၊ ဘောင်ချာ ထုပ်မှာလား အကုန်လုပ်လို့ ရပါတယ် ၊ စာရင်းတွေ သွင်းထားပြီးရင်တော့ ကုန်ကျစရိတ်တွေ ပေါ်မူတည်ပြီး Builk ကနေ သင့်အနေနဲ့ Report တွေ အလွယ်တကူကြည့်လို့ ရပါပြီ ။
Builk ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ
ဘောင်ချာ နှင့် ပြေစာမျိုးစုံ အတွက် Builk ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် . ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းတွေ မှာ အသုံးပြုနေကြဖြစ်တဲ့ ၀င်ငွေ ၊ စပေါ်ငွေ ၊ စရံငွေ ၊ အရစ်ကျ သွင်းငွေ နဲ့အခွန်သွင်းငွေ စသဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒီ feature က သင့်လုပ်ငန်းစီမံကိန်း အတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် income-expense comparison report ကို ပြသပေးပါလိမ့်မယ်။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ အတွက် အဓိက ကျစေမယ့် Report ၉ မျိုးကို ဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ် ။ သင့်ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ အနေနဲ့အချိန် နဲ့ငွေကြေးသက်သာမှူတွေ ကို ယူဆောင်လာပေးမှာ အသေအချာပါပဲ
WHY Construction Businesses choose BUILK
“After I had using BUILK cost
control asacriteria for managing the project,
it provided me an advantageous.”
BUILK PRO NETWORK @Ubonratchathani
“I used BUILK for my whole hospital project at Myanmar, and the results came out as we wanted it to be. BUILK give usaclear vision of the project. “
Indesign Myanmar Co.,Ltd.
BUILK PRO NETWORK @ Bangkok/Mandalay
“I’m using BUILK cost control for either its house building project or big construction project and it derives meagrowing business of mine. “
Chiang Mai Home Builder
BUILK PRO NETWORK @ Chiang Mai
BUILK Myanmar နဲ့ MES တို့ပူးပေါင်းပြုလုပ်တဲ့ Builk Cost Control Works...
GOBUILK By SCG...
JOINT PROGRAM OF BUILK & MES sporsored by SCG
Builk X Maugnthong Aluminium Yangon
Builk X SHERA For Mandalay Constuction မန္တလေး ဆောက်လုပ်ရေး
Other services offer by BUILK
YELLO MYANMAR - material sourcing
JUBILI by BUILK - CRM for Building Material Store
A B2B online construction materials store,alower price construction materials sale service; exclusively for just BUILK users. “Together we buy, together we save.”
Reduce materials cost by our online RFQ and purchase order via YELLO Smart Purchase.
The sale and customer service management service system for specially only for the construction material stores. We assist the store to strengthen their sale department and increase an opportunity to reach out to the potential customers from BUILK.COM
Work better & smarter, order material online.
We started to place an order via Yello since the project drafting, till the project forming. Countless option with One stop.
First Corporations Co., Ltd.
Convenience & Quick. We favor the BUILK Reward Point, the feature has given the works to be more enjoyable.
RAM Engineering Co., Ltd
Yello has helped coordinatingalot between the manufacture & sale relationship, and its really positive the situation.
The products are well quality and the prices are also comparable to the big retailers.
T.TAS Co., Ltd.
Inside Scoop: with BUILK
Construction Safety Equipment...
မိုးရာသီမှာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုကြိုတင်ပြင်ဆင်သင့်သလဲ ...
WHAT IS BUILK PRO NETWORK?